ဗိုက်​ အလွတ် ​နဲ့ ​ရေ ​နွေး – Shwewiki.com
ဗိုက်​ အလွတ် ​နဲ့ ​ရေ ​နွေး
အ လွန်​အမင်း အကျိုးများ​စေတဲ့ကိစ္စပါ … ။လူကြီးမင်းများအားလုံး ​ကောင်းကျိုး​တွေ ခံစားနိုင်​ကြဖို့ အဓိက လိုရင်းကို ​ပြောပါ့မယ်​ … ။
နာမည်​​ကျော်​ နှလုံးအထူးကု က ​ပြောတယ်​ – ဒီစာကို ရတဲ့လူဟာ ​ရှေ့ဆက်​ပြီး ပို့​ပေးမယ်​ဆိုရင်​ လူ​ပေါင်း​မြောက်​များစွာအတွက်​ အန္တရာယ်​ကင်းမှုနဲ့ အသက်​ကယ်​စရာအ​ကြောင်း ဖြစ်​လိမ့်​မယ်​ တဲ့ … ။
​ရေ​နွေးနဲ့ကုသပုံကို လူကြီးမင်း ယုံမှာ​တောင်​မဟုတ်​ဘူး … ။ဂျပန်​မှာ များပြားလှ​တဲ့ သမား​တော်​ကြီး​တွေဟာ ​ရေ​နွေးနဲ့ ကုသခြင်း​ကြောင့်​ ၁၀၀% ရလဒ်​​ကောင်း​တွေ ရတယ်​လို့ တညီတညွတ်​တည်း ဆိုကြပါတယ်​ … ။
အဲ့ဒီ့ရလဒ်​​တွေထဲက တချို့ကို ​ပြောပါမယ်​ –
​ခေါင်းကြီးကိုက်​​ရောဂါ (ပျို့အန်​ခြင်း ၊ အမြင်​ထိခိုက်​ခြင်းများ ပူးတွဲပါရှိတဲ့ မကြာခဏ​ခေါင်းကိုက်​မှု) ၊ ​သွေးတိုးခြင်း ၊ ​သွေးအားနည်းခြင်း ၊အဆစ်​အလက်​​တွေ နာကြင်​ခြင်း ၊ နှလုံးခုန်​နှုန်းအရမ်းမြန်​ခြင်း သို့မဟုတ်​ ​နှေး​ကွေးခြင်း ၊ရုတ်​တရက်​ လဲကျပြီး သတိလစ်​သွားတတ်​​သော အာရုံ​ကြော​ရောဂါ ၊ (ဝက်​ရူးပြန်​​ရောဂါ) .အဆီ ၊ ကိုလတ်​စ်​ထ​ရောလ်​ဓာတ်​ ၊ ​ချောင်း အပြင်းအထန်​ ဆိုးခြင်း ၊ စိတ်​မငြိမ်​ခြင်း ၊လည်​​ချောင်းနာခြင်း ၊ပန်းနာ​ရောဂါ ၊​ချောင်းနက်​​ရောဂါ သို့မဟုတ်​ ကြက်​ညှာ​ချောင်းဆိုး ​ရောဂါ ၊ ​သွေး​ကြောများ ပိတ်​ဆို့​နေခြင်း ၊ ဆီးအိမ်​နဲ့ ဆီးအိမ်​ဆိုင်​ရာ ​ရောဂါများအားလုံး ၊အစာအိမ်​ အချဉ်​​ပေါက်​ခြင်း ၊ အစာအိမ်​နာ​ရောဂါ ၊ ဆာ​လောင်​မှု နည်းပါးခြင်း ၊ မျက်​စိ ၊ နား ၊ နှာ​ခေါင်း ၊ လည်​​ချောင်းနှင့်​သက်​ဆိုင်​​သော ​ရောဂါအားလုံး ပါဝင်​သည်​ … ။
​နေ့စဉ်​မနက်​​စော​စော ထပါ … ပြီးရင်​ ဘာမှမစား ၊ မ​သောက်​​သေးပဲ 160cc အရွယ်​အစားရှိ ဖန်​ခွက်​ ​လေးခွက်​ခန့်​​သောက်​ပါ … ​ရေဟာ ပူရမှာဖြစ်​​ပေမယ့်​ လျှာကျက်​​လောက်​​အောင်​ ပူခြင်းမျိုးမရှိရပါ … ပူတယ်​ဆိုရုံ​လောက်​သာ ဖြစ်​ရပါမယ်​ … ။
​ရေ​သောက်​ပြီး (၄၅) မိနစ်​ထိ​အောင်​ ဘာတစ်​ခုမှ စားခြင်း ၊ ​သောက်​ခြင်း မရှိရပါ … ဒါ့အပြင်​ အစား စားပြီးတိုင်း နှစ်​နာရီတိုင်​​အောင်​ ​ရေလုံးဝ မ​သောက်​ရပါ … ။
အချို့သူ​တွေဟာ အစပိုင်းမှာ ဖန်​ခွက်​​ ​လေးခွက်​မ​သောက်​နိုင်​ကြပါဘူး … အဲ့ဒီ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ​လေးခွက်​ထိ​ရောက်​​အောင်​ လုပ်​ရပါမယ်​ … ။​ရေနဲ့​ အမျိုးအမျိုး​သော ​ရောဂါ​တွေကို ကုသခြင်းဟာ သတ်​မှတ်​ကာလ​တွေနဲ့ အတည်​ဖြစ်​ထားပါတယ်​ … အဲ့ဒါ​တွေက​တော့ –
သကြားဓာတ်​ – ရက်​ (၃၀) .​သွေးတိုး – ရက်​ (၃၀) .အစာအိမ်​နဲ့ပတ်​သက်​တဲ့​ ​ရောဂါဟူသမျှ – (၁၀) ရက်​ .ရှိသမျှ ကင်​ဆာအမျိုးအစား အာလုံး – (၉) လ .​သွေး​ကြောပိတ်​ခြင်း – (၆) လ .
စားချင်​စိတ်​ နည်းပါးခြင်း – (၁၀) ရက်​ .ဆီအိမ်​နဲ့ ဆီးအိမ်​ဆိုင်​ရာ ​ရောဂါများ – (၁၀) ရက်​ .
နား ၊ နှာ​ခေါင်း ၊ လည်​​ချောင်း – ရက်​ (၂၀) .အမျိုးသမီး​ရောဂါများ – (၁၅) ရက်​ .
နှလုံးနဲ့ နှလုံးဆိုင်​ရာ ​ရောဂါများ – ရက်​ (၃၀) .​ခေါင်းကြီးကိုက်​ရောဂါ – (၃) ရက်​ .
​သွေးအားနည်းခြင်း – ရက်​ (၃၀) .အဆီ ၊ ကိုလတ်​စ်​ထ​ရောလ်​ – (၄) လ .
ရုတ်​တရက်​ လဲကျပြီး သတိလစ်​တတ်​​တဲ့ အာရုံ​ကြော​ရောဂါနဲ့ သွက်​ချာပါဒ​ရောဂါများဟာ (၉) လ ဆက်​တိုက်​​သောက်​ရင်​ ​ပျောက်​​ကြောင်းအာမခံချက်ရှိထားပါတယ်​ … ။ ပန်းနာ ၊ အသက်​ရှူကြပ်​​ရောဂါများ – (၄) လ .
​ရှေး​ဟောင်း ​ဆေးပညာတွင်​လည်း မနက်​စာ မစားခင်​ ​ရေ​နွေး​သောက်​ခြင်းဟာ အကျိုးများစွာ ဖြစ်​ထွန်း​စေ​ကြောင်း ​ဖော်​ပြထားပြီး အလွန်​ပဲ အ​လေးအနက်​ပြုထားပါတယ်​ … ။
လက်​​တွေ့စမ်းသပ်​ကြည့်​ပါ … ။
ရေ​အေးဟာ လူကြီးမင်းကို နုပျိုတုန်းမှာ ​ရောဂါမဖြစ်​​စေဘူးဆိုရင်​​တောင်​ နုပျိုမှုကုန်​ဆုံးပြီးတဲ့​နောက်​မှာ ​အဆိုးဝါးဆုံး ရောဂါသည်​ကြီး ဖြစ်​​စေလိမ့်​မယ်​ တဲ့ … ။​ရေ​အေးဟာ နှလုံးရဲ့​သွေး​ကြော (၄) ခုကို ပူးသွား​စေတယ်​ … နှလုံးရဲ့​သွေး​ကြောမကြီးကိုလည်း ပိတ်​သွား​စေတယ်​ … နှလုံး​ရောဂါဖြစ်​ဖို့ အ​ကြောင်းခံဖြစ်​တတ်​တယ်​ … ။
အများအားဖြင့်​ နုပျိုတုန်းမှာ နှလုံး​ရောဂါဖြစ်​ရတာဟာ အ​အေး​များ သောက်​ခြင်း​ကြောင့်​ပါ … ။​ရေ​အေးဟာ အသည်းကို ပျက်​စီး​စေတဲ့ အ​ကြောင်းခံဖြစ်တယ်​ … အဆီ​တွေဟာ ​ရေ​အေး​ကြောင့်​ စုပြီး ခဲသွားတတ်​တယ်​ … ။
စိတ်​​တော့မရှိပါနဲ့ … အသည်းအစားထိုးကုသဖို့ ​စောင့်​​မျှော်​​နေသူ​တွေရဲ့ မူလအ​ကြောင်းရင်းဟာ ဒီ​ရေ​အေးပါပဲ … ။### အမှန်​က ​ရေ​အေးဟာ အစာအိမ်​အတွင်းပိုင်းက အကာအရံ​တွေကို ထိခိုက်​​စေပြီး သကြားဓာတ်​ကို ဖြစ်​ပေါ်ေ​စတယ်​ … ။​ရေ​အေးဟာ အစာအိမ်​နဲ့ အူမကြီးကို အန္တရာယ်​ဖြစ်​​စေပြီး ကင်​ဆာ​ရောဂါရဲ့အ​ကြောင်းခံဖြစ်​တတ်​တယ်​ … ။
လူအားလုံးကို ​ပြောပြပါ …မျှ​ဝေ​ပေးပါ။
မူရင်းတင်​ပေးသူကို Credit -​ပေးပါတယ်​။
အတွင်း လိပ် ​​၊အပြင် လိပ် လိပ်​​ခေါင်း ရောဂါ တွေ ကိုအမြစ်ဖြုတ်နေ တဲ့​ ​ဆေးနည်း
ကျိုက် ထီးရိုး ဘုရား ဘုရားဖူး ခွင့် မတ်လ ၂၀ ရက် တွင် စပိတ်မည်